Sivanina ny famolavolana ny Samsung Galaxy View 2 | Androidsis
Eder Ferreno | | Samsung, Takelaka Android
Samsung dia iray amin'ireo marika Android izay manohy miloka amin'ny fandefasana takelaka eny an-tsena. Raha ny marina, hatreto amin'ity taona ity dia afaka nihaona modely vaovao telo amin'ny marika Koreana isika. Ny Galaxy Tab A 8.0, la Galaxy Tab 10.1 ary ny mahery indrindra rehetra, ny Galaxy Tab S5e. Na dia miasa orinasa vaovao aza ny orinasa koreana, izay efa navoaka. Ity ny Galaxy View 2.
Satria ny anarany dia mamela antsika hivezivezy, Io no taranaka faharoa amin'ny takelaka Samsung. Efatra taona izay taorian'ny nanombohana ny Galaxy View voalohany teny an-tsena. Na dia mandraka ankehitriny aza toa tsy nisy ny fikasana hanangana maodely vaovao. Ny famolavolana an'ity kinova vaovao ity dia efa tafaporitsaka.
Ny Samsung Galaxy View dia takelaka iray nanjary nalaza noho ny habeny lehibe. Zavatra mbola mijanona amin'ity taranaka vaovao ity, satria ho avy izy miaraka amin'ny Efijery haben'ny 17,5 inch. Farafaharatsiny araka io famoahana io. Ny endriny dia hitovy amin'ny maodely tany am-boalohany, miaraka amin'ny frame mazava eo amin'ny efijery voalaza.
Na izany aza, ny takelaka dia manolotra fiovana sasany amin'ny endriny. Satria hitanao fa amin'ity tranga ity, karazana fanohanana vaovao no atolotra aoriana. Amin'ity tranga ity dia ampiasaina ny rafitra iray misy karazana savily, izay mamela an'ity fomba ity hamelatra ny fanohanana ary hanitsy ny zoro hametrahana ny takelaka amin'ny fotoana rehetra.
For now tsy misy fampahalalana momba ny specs azontsika antenaina amin'ity sonia Galaxy View 2 ity. Na dia misy aza ny tsaho momba ny processeur. Voalaza fa ny processeur voafidy ao dia ny Exynos 7885, saingy tsy zavatra efa voamarina izao.
Izahay koa tsy mahalala na inona na inona momba ny fandefasana an'ity Galaxy View 2 ity mankany an-tsena. Ny hany fantatsika hatreto momba ity takelaka ity dia amin'ny alàlan'ny famoahana ireo. Ka tsy maintsy miandry vaovao mivaingana momba izany isika. Mety hahafantatra bebe kokoa isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Namoaka Samsung Galaxy View 2 vaovao
[VIDEO] Ahoana ny fomba hamoronana ny Bixby Routine mandeha ho azy voalohany amin'ny Galaxy S10 +